पर्वतको लुंखुदेउरालीमा लकडाउनले प्रभावित विद्यार्थीका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्र संचालनमा - News site from Nepal
पर्वतको लुंखुदेउरालीमा लकडाउनले प्रभावित विद्यार्थीका लागि सामुदायिक सिकाई केन्द्र संचालनमा
पर्वत – विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएका कोरोना भाईरसका कारण नेपाल विगत झण्डै चार महिनादेखि लक डाउनमा छ ।
लक डाउनका कारण सवैजसो क्षेत्र ठप्प जस्तै बनेको छ । लक डाउन केहि खुकुलो भएपनि शैक्षिक क्षेत्र ठप्प नै छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुको पढाईलाई निरन्तरता दिनका लागि पर्वतका महाशीला गाउँपालिका वडा नं. ५ लुंखुदेउरालीमा सामुदायिक सिकाई केन्द्र संचालनमा आएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्र र शहरबजारवाट गाउँमा फर्किएका विद्यार्थीहरुको अनलाईन कक्षा र अन्य सुचना प्रविधिको माध्यमवाट पठनपाठन नियमीत गर्न सहज होस् भन्ने उद्धेश्यले शनिवारदेखि महेन्द्रज्योती सामुदायिक सिकाई केन्द्र संचालन ल्याईएको हो । गाउँका विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको अभावमा भौतारिनु परेको तथा मोवाईल डाटा महंगो हुने र प्रभावकारी समेत नहुने अवस्थामा महाशीला गाउँपालिका वडा नं. ५ को वडा कार्यालयको सहयोगमा सिकाई केन्द्र संचालनमा ल्याईएइको हो ।
उक्त केन्द्रमा विद्यार्थीहरु विहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म बसेर आवश्यक पठन पाठन गर्न सक्ने भएका छन् । प्रभावकारी इमेल इन्टरनेट, तीन वटा कम्प्युटर, फ्रि वाईफाईको व्यवस्था गरिएको छ । विद्यार्थीहरुले आफ्नै ल्यावटप वा केन्द्रका कम्प्युटर निःशुल्क प्रयोग गरेर शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने महाशीला गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नं. ५ का अध्यक्ष जीवन विक्रम ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त सामुदायिक सिकाई केन्द्रमा तीन हजार भन्दा बढि उपयोगी पुस्तकहरु समेत रहेका छन् । विद्यार्थीहरुले आफ्नो कक्षागत पाठ्यक्रमका अतिरिक्त पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरुवाट पनि ज्ञान हासिल गर्न सक्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा उक्त सिकाई केन्द्र प्रभावकारी हुने अध्यक्ष ठकुरीले बताउनुभयो ।
ठकुरीका अनुसार उक्र केन्द्रमा जुनसुकै कक्षाका विद्यार्थीहरु पनि आएर इमेल इन्टरनेटको निःशुल्क प्रयोगवाट शिक्षा आर्जन गर्न सक्नेछन् ।
सिकाई केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि महाशीला गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु २ लाख रुपैया बजेट समेत बिनीयोजन गरेको छ । केन्द्र संचालनका लागि एक जना कर्मचारी समेत नियुक्त गरिएको छ ।
लकडाउनका कारण गाउँ फर्किएकी विएन नर्सिङ अध्ययनरत समिना मल्लको विशेष सक्रियता पछि केन्द्रवाट उक्त सेवा सुचारु गरिएको हो ।
यसैबीच शनिवार एक कार्यक्रमका बीच सिकाई केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ । वडा अध्यक्ष जीवन उच्चै ठकुरीले केन्द्रको उद्घाटन गर्दै लामो समयदेखिको अवरुद्ध पढाईलाई निरन्तरता दिन यो केन्द्र महत्वपुणर् हुने बताउँदै गाउँमै बसेर पनि पढाईवाट बञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सिकाई केन्द्रको भरपुर उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।